पोखराका बुद्ध लामा बने पहिलो 'नेपाल आइडल' - Internet Khabar
September 22, 2017 September 23, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौँ, ७ असोज । प्रतिष्ठाको पहिलो आवाज नेपाल आइडलको उपाधि पोखरा नयाँबजारका बुद्ध लामाले जितेका छन्। कतारको दोहास्थित एसियन टाउन एम्पिथिएटर, ग्रान्ड मल, सनायामा शुक्रबार राति भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई उछिन्दै पोखरा नयाँबजारका बुद्ध पहिलो नेपाल आइडलको उपाधि चुम्न सफल भएका हुन्।
यो जितसँगै उनले २० लाख रुपैयाँ, महिन्द्रा केयूभी १०० कार र १५ लाख रुपैयाँको एल्बम कन्ट्र्याक प्राप्त गरेका छन्। बुद्धलाई लोकप्रिय हास्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य ९महजोडी० ले पुरस्कार प्रदान गरे। एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारित प्रतियोगितामा उर्लाबारी मोरङका निशान भट्टराई र झरुवारासी ललितपुरका प्रताप दास क्रमशः फस्ट र सेकेन्ड रनरअप घोषित भए। निशानले ३ करोड ५० लाख ८६ हजार २ सय २३ भोट प्राप्त गरे भने प्रतापले १ करोड ३२ लाख ५१ हजार ८ सय ४९ भोट पाए।
फस्ट रनरअप निशानले १५ लाख रुपैयाँ र सेकेन्ड रनरअप प्रतापले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पारे। विजेता एवं अन्य सहभागीलाई हौसला प्रदान गर्न महजोडी कतार पुगेका थिए। फ्रिमेन्टल मिडियाले तय गरेका आधार पूरा गर्ने नेपालको एक मात्र टेलिभिजन एपीवान एचडीमार्फत पहिलो पटक नेपालमा सुरु भएको आइडल सिरिजले सुस्ताएको नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई ऊर्जा दिएको छ।
छोरी बलात्कार गर्नेहरुसँग बदला लिदैं सञ्जय दत्त !
हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको शल्यक्रिया सफल, स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
एशिया कप छनोट क्रिकेट : नेपाल युएइसँग ७८ रनले पराजित
एमाले-माओवादी एकताबारे यस्तो आयो ओलीको निर्देशन
निरन्तर उकालो लाग्दै सुन-चाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस् बजारभाउ
नेपाल आइडलकी एक प्रतिस्पर्धी, जसले जजलाई एकैछिनमै हसाँईन र रुवाइन पनि (भिडियो)
के हो केश मुण्डन परम्परा, किन खौरिन्छन् कपाल ? जान्नुस
सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनामा बृद्धि गरेको दण्ड शुल्कको विरुद्ध यातायात
वीर, थापाथली र कान्ति अस्पतालमा अब लाइन बस्नु नपर्ने